Free Ads | Akonthi
တောင်အာရှမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လူနာ ၆၀၀၀ ခန့် ရှိလာတာကြောင့် ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှု အချိန်တွေ တိုးချဲ့ဖို့ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေ သတိပေး
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက် ၀မ်းနည်းပူဆွေးကြောင်း ပြသ
မွတ်စလင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့နဲ့ စပ်ဆက်ပြီး လူပေါင်း ၄၀၀၀၀ အား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ကွင်းဆက်ကို မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့
Covid -19 စောင့်ကြည့် လူနာ ၁၅၀၀၀ ဆန့် quarantine centre တပ်မတော်ပြင်ဆင်ထား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများ၏ ပြင်ဆင်မှု/စိုးရိမ်မှုတွေ ဘယ်လိုရှိသလဲ
ဈေးကွက်ထဲမှာ အခိုင်အမာနေရာယူထားပြီးဖြစ်တဲ့ Walco အသင့်သောက်နွားနို့
ကိုဗစ်ရောဂါက ကူးမှန်းမသိတာရယ် ၂ ပတ်လောက်နေမှသိရတာက တကယ့်ပြဿနာ ဆိုတဲ့ ရန်အောင်
ယုန်လေး ကူညီလိုက်လို့ အဆင်ပြေသွားတဲ့ Min Z
၂၄ နာရီအတွင်း အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ထူးခြားလှုပ်ရှားမှုများ (၇၈၄)
အိမ်တွင်းအောင်းနေရင်း ၎င်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေမျှဝေလာတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
ကိုဗစ်ရောဂါ ဆေးမရှိပေမယ့် ပြန်ကောင်းလာသူတွေအများကြီးပါလို့ အားပေးစကားဆိုလာသူ ခိုင်သင်းကြည်
ပြည်တော်ပြန်တွေကို Quarantine ခံယူဖို့ နှိုးဆော်လိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီထွန်းထွန်း
ချမ်းအေးဝင်းရဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ Rap သီချင်း
၂၄ နာရီအတွင်း အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ထူးခြားလှုပ်ရှားမှုများ (၇၈၃)
နေ၀င်းရဲ့ Challenge ကိုလက်ခံပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) Rap စာသားကို ဆိုပြသွားတဲ့ နိုင်းဝမ်း
၀မ်းရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရပေမယ့် မပေါ့ဆဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း
MC ကယားလေးနဲ့ နိုင်းဝမ်းတို့ရဲ့ Challenge တုံ့ပြန်ပြီး စိုင်းစိုင်းကို Challenge ခေါ်လိုက်တဲ့ ယုန်လေး
Rap Challenge မှာ ပါဝင်လိုက်တဲ့ နေ၀င်း
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ(၇၅၈)
အီတလီမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးသူ ၇၆၆ ဦး ထပ်တိုးပြီး နေ့စဉ်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လူနာ အရေအတွက် အနည်းငယ်ကျဆင်းလာ
ဆွီဒင်ဓာတ်ပုံဆရာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရှဉ့်လေးတစ်ကောင် ၀ိတ်မနေပုံကို ပရိသတ်များ အကြိုက်တွေ့နေ
အမေရိကန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးသူ ၁၁၆၉ ဦးအထိ ထပ်တိုးလာ
အစ္စရေး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရ
ဟောင်ကောင်ရှိ အိမ်မွေးကြောင်တစ်ကောင်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
အမေရိကန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သေဆုံးသူဦးရေ တရုတ်နိုင်ငံထက် မြင့်တက်လာတာကြောင့် ယာယီဆေးရုံတွေ အမြန်ဆုံး ဆောက်လုပ်နေ
အိမ်နေ အလုပ်လုပ်ရသူတွေအတွက် ထိုင်းအစိုးရက Mobile Data 10 GB အခမဲ့ပေး
COVID-19 နဲ့ဆက်စပ်ပြီး April Fool လုပ်ရင် ထောင်ချခံရမည်ဟု နိုင်ငံများစွာ သတိပေး
အမရေိကနျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၃၀၀၀ ကြျောလာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ
အထူးထူးသောပြဿနာပေမဲ့ အကျိုးထူးခံစားရမယ့် ကြာသပတေးနေ့သားများ
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းကောင်းများစုစည်းမှု ( ည ၈ နာရီရုပ်သံ ) ၁-၄-၂၀၂၀
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ(၇၅၇)
၁၅ ယောက်မြောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံ လူနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းအခြေအနေ
12 May 2018 - 0
Our company has both the necessary know-how and technical equipment to offer competitive solutions to all users of the global network. The modern technologies have undergoneasignificant development in the last decades. Hence our team has developed its own strategy, which relies not only on the quality of the product, but also on the prompt and timely support of our clients.
Shwe Moe Nyo
Our shwe moe nyo isaweb development agency that focus on web design and web development and web development for all types of businesses and other organizations using the excellent free PHP content management system. Web development is creating the technical behind the scenes functionality of the web site. This involves such tasks as installing, configuring and customizing extensions, search engine optimization, creating forms and surveys and writing customized code.
Subscribe to Free Ads
မိုးသောက်ကြယ် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိပ်နှင်းရေးအဖွဲ့ကို ဒေသခံပြည်သူအင်အား ၈၀၀ကျော် မှ ထောက်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြ ---------------- မိုးသောက်ကြယ် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိပ်နှင်းရေးအဖွဲ့ကို ဒေသခံပြည်သူအင်အား ၈၀၀ကျော် မှ ထောက်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ သည်လို
ကျောက်ဖြူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းမှာ မြန်မာ-တရုတ် စီးပွားရေးစင်္ကြန်အတွက် အရေးပါသော စီမံကိန်းဖြစ်ဟု ဆို
သဖန်းကုန်းအုပ်စုမှ ငါးကန်မြေနေရာကို လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်
အမျိုးသားအားကစားရုံ-၁ ကို တရုတ်နိုင်ငံက ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ အကုန်အကျခံကာ ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ပေးမည်
၀နျကွီးမြားရုံးမှာ ကငျြးပတဲ့ မွနျမာ့ဂုဏျဈေးရောငျးပှဲတျော
နာဂျစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီး ကမ္ဘာ့ အသက်ကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည့် မဟာသီက 1MDB ရန်ပုံငွေအရှုပ်တော်ပုံမှ ပျောက်ဆုံးငွေ ပြန်ရအောင် လုပ်မည်ဟုဆို